Ungabhukuda kuphi namahlengethwa eSpain | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | 06/01/2022 17:00 | Kubuyekezwe ku- 19/12/2021 15:03 | Amathiphu, España
I-Los amahlengethwa mahle futhi ahlakaniphe kakhulu. Ziyizilwane ezincelisayo zasolwandle, ama-cetaceans, kanye kunezinhlobo ezingama-34. Uthi bewazi? Ngiyazithanda, kodwa ngizibheka njengezilwane nokuthi kufanele uzishiye zodwa, ngakho-ke angisiqondi ngempela isifiso sezivakashi sokuthi abantu bahlanganyele nabo ...
Kodwa-ke, umbuzo uthi, Ungakwazi yini ukubhukuda namahlengethwa eSpain? Ngokomthetho, akukho. Amaqembu ezemvelo akuqinisekisile, kodwa noma kunjalo kunezindawo ezimbalwa lapho ungazibona ngandlela thize eduze. Ake sazi okwengeziwe ngale ndaba.
Ukubhukuda namahlengethwa eSpain
Njengoba sishilo, kunzima impela ukubhukuda namahlengethwa eSpain ngoba akuvunyelwe. Noma kunjalo, kunezindawo ezimbalwa lapho yebo kunemibukiso yamahlengethwa futhi noma ngabe ungaba seduze, isibonelo ku I-Madrid Zoo noma i-Barcelona Zoo.
Ukuze uxhumane kakhulu nabo kufanele uye ku Benidorm, ukuya eMundomar. Nakhu kukhona Enye yama-dolphinariums amahle kakhulu eYurophu, hhayi ngamahlengethwa kuphela kodwa ezinye izilwane zasolwandle ezifana nezimfudu, amabhubesi olwandle, ama-otters, ama-flamingo ... Kunezinhlobo ezingu-80 sezizonke futhi kuyindawo lapho ungazijwayeza khona. ukwelashwa ngamahlengethwa.
E-Mundomar okunikezwayo kukhona imihlangano yesigamu sehora ngamahlengethwa, njalo kukhona abagcini noma abaqeqeshi abafundisa umphakathi izici ezithakazelisa kakhulu zalezi zilwane ezinhle. Ukuhamba nezingane kuwuhlelo oluhle kakhulu. Umzuzu ke uthatha imizuzu engu-30 futhi uhlanganisa umhlangano nezilwane, izithombe ezimbili ezizokhumbula phakade othintana naye, ithawula lesipho, ubhaka kanye nebhodlela elincane lamanzi amaminerali.
Lapha Kutuswa ukuthi wenze ukubhuka kusenesikhathi, okungenani isonto lonke, ngesitolo se-inthanethi noma ngokuthumela i-imeyili ku-mundomar@mundomar.es ebonisa igama, isibongo, inombolo yocingo lweselula, inombolo yezingane kanye nabantu abadala kanye nesikhathi sentshisekelo (esingaba ngo-12 noma 16 pm) .
Ungashayela futhi ngocingo, yonke imininingwane ikuwebhusayithi. Yini yebo udinga ukwazi ukubhukuda futhi ungabi nokukhubazeka kwengqondo, ungakhulelwa futhi uma uyingane futhi uphakathi kweminyaka engu-5 nengu-12 ubudala futhi ungakwazi ukubhukuda, phelezelwa umuntu omdala. Lolu hlobo lomsebenzi kwenzeka phakathi kukaNdasa noZibandlela, nsuku zonke, futhi intengo ingama-euro angu-80 ngomuntu omdala kanye nama-55 ngengane ngayinye.
Enye indawo eSpain lapho ungahlangana khona namahlengethwa iseCatalonia futhi yi-Aquopolis. Le ndawo iseCosta Dorada, eLa Pineda, eduze kwaseSalou futhi yinhle ipaki lamanzi. Uxhumana namahlengethwa ngokusebenzisa a ukuvakasha okuqondisiwe, nenkulumo yokufundisa kanye nokuxhumana okuncane okuvumela izilwane ukuthintwa, njalo ngaphansi kweso elibukhali labagcini.
Ngokusobala, ungathatha izithombe. Namuhla inani Ama-euro angama-74 ngomuntu omdala kanye nengane ngayinye. Izingane kufanele okungenani zibe neminyaka eyisikhombisa ubudala futhi okungenani zibe ngamamitha angu-1, 15 ubude. Labo abaphakathi kweminyaka eyi-7 neyi-10 kufanele bahambisane nomuntu omdala obambe iqhaza emhlanganweni.
Ku Umphakathi waseValencian ungase futhi ube nokuhlangana namahlengethwa. Kuphi? Ngo I-Oceanogràfic yaseValencia kanye ne-Animalia Passport. Ngeke ukwazi ukuhlangana kuphela amahlengethwa kepha futhi nge amabhubesi olwandle futhi ufunde konke mayelana nempilo yalezi zilwane ezinhle. Bese uthatha isithombe esiyisikhumbuzo. Ingakanani imali yalo msebenzi? € 44,70 umuntu omdala futhi € 37 ingane ngayinye.
Ukuze ubone amahlengethwa aseValencia, izingane kufanele okungenani zibe neminyaka eyisithupha ubudala futhi uma ziphakathi kwesithupha neshumi nambili kufanele ziphelezelwe nomuntu omdala. Okuthakazelisayo lapha ukuthi uma unesithakazelo emsebenzini wabanakekeli, ungaba omunye wabo usuku. Yebo, Ungaba Umqeqeshi usuku lonke futhi ufunde ngendlela abazinakekela ngayo izilwane. Okwengeziwe: isipiliyoni sokulala noshaka sinikezwa ngama-euro angama-90.
El I-Delfinarium Selwo Marina iseMalaga, kumasipala waseBenalmádena. Lapha i-dolphinarium inomgwaqo ongaphansi kwamanzi, ongaphansi kwamanzi, ukuze ukwazi ukwazisa izilwane ngokuseduze. Imidlalo ihlelekile futhi ungathatha izithombe futhi uthinte amahlengethwa lapho leyo misebenzi isiqediwe. Izinga lengane ngayinye lingama-euro angu-39 futhi umuntu omdala ngamunye ama-euro angu-74, kuye ngesizini oya kuyo.
Ubuncane beminyaka yokuthi izingane zijabulele lokhu okwenziwa eMalaga yiminyaka emi-5, futhi yebo, uma ziphakathi kuka-5 no-7 kufanele zibe sezandleni zomuntu omdala. Futhi azikwazi ukukala ngaphansi kwamamitha angu-1,25 ubude futhi uma kunjalo, kanye nomuntu omdala eduze kwazo.
Lezi yizindawo lapho ungahlangana khona namahlengethwa eSpain. Qaphela ukuthi angisho ukubhukuda ngoba njengoba sishilo ekuqaleni ukuthi umsebenzi awuvumelekile ezweni. Kumayelana nokuxhumana, ukuba seduze, ukubathinta, hhayi okunye okuningi..
Ngaphandle kweSpain, nakuba kuseduze, ungenza okwengeziwe ePortugal, eZoomarine. Lapha yebo uyakwazi ukubhukuda Nokho, ungangena echibini elikhulu elizungezwe izitshalo nesihlabathi esimhlophe. Kubiza kakhulu kepha kuyafaneleka: kubiza ama-euro ayi-125, kuye ngesizini.
Kodwa ingabe ayikho ngempela enye indawo eSpain? Hhayi-ke, ungaya ogwini lwase-Atlantic futhi ubhalisele ukuvakasha okukuvumela ukuthi uyobabona endaweni yabo yemvelo., Yebo kunjalo. Kukhona izinkambo zalolu hlobo eziqhingini zaseCanary, ngokwesibonelo, kodwa namanje akukho emthethweni ukubhukuda ndawonye.
Iqiniso liwukuthi kubonakala kuphelele kimi ukuthi awukwazi ukubhukuda namahlengethwa. Lokho kokugcina izilwane ziphucwa inkululeko yazo kubonakala kuyinto eshaqisayo kimina, evamile ekhulwini le-XNUMX, akunjalo? Isiphi isidingo esikhona namuhla sokunakekela lezi zinhlobo zezindawo lapho ungakwazi ukuhamba noma ukubukela kumabonakude noma ku-inthanethi? Yebo, ngiyazi, ukubhukuda namahlengethwa kumelwe kube okumangalisayo futhi okuhlangenwe nakho okungenakulibaleka ngempela, kodwa ingabe kufanelekile ukugcizelela lezi zilwane, ukuzihlukumeza ezikebheni ezigcwele izivakashi noma ukuzivalela kuma-dolphinarium ukuze abantu bazithinte futhi bazithwebule izithombe?
Uma noma kunjalo umsebenzi ukuthakasela iseluleko sami yileso bheka ukutshuza noma ukubhukuda phakathi kwamahlengethwa endle. Ukwenza ngezilwane zamahhala kuyamangalisa futhi kuhluke kakhulu ekuxhumaneni nesilwane esivaliwe, njengoba lokhu kukhuthaza ukuzingela kuphela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » España » Lapho ongabhukuda khona namahlengethwa eSpain
Amadolobha amahle eSierra de Madrid